किसानको अपेक्षा र कृषि बजेट
कृषिप्रधान देश नेपालको नीति कार्यक्रम तथा बजेट स्वभाविक रूपमा कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आउनुपर्र्र्ने हो, तर विगत लामो समयदेखि त्यसो हुन सकिरहेको छैन । ३ सय ६५ दिन कृषिप्रधानको नारा जप्ने नीतिनिर्माताहरू जब महत्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने एक दिन उनीहरूको अगाडि आइपुग्छ, त्यसपछि उनीहरूको प्राथमिकताका क्षेत्रहरू अरू नै हुने गरेका छन् । विगत डेढ दशकदेखि यो क्रम निरन्तर चलिरहेको छ ।
आर्थिक वृद्धिदरमा धानको महत्व
‘राइस इज लाइफ’ अर्थात् धान जीवन हो भन्ने नारासहित दोस्रो पटक अन्तर्राष्ट्रिय धान वर्ष मनाइएको पनि १४ वर्ष भयो । संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा सन् २००४ मा अन्तर्राष्ट्रिय धान वर्ष मनाइएको थियो ।
अर्थतन्त्रमा बैंकिङको प्रभाव
नेपालमा बैंकिङ विकासको प्रारम्भ वि.सं. १९९४ बाट भएको हो । सुरुमा नेपाल बैंक लिमिटेडले देशको केन्द्रीय बैंकका रूपमा कार्य गर्दै आएको थियो भने वि.सं. २०१३ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले देशको केन्द्रीय बैंकका रूपमा कार्य गर्दै आइरहेको छ ।
माओत्से तुङपछि चीनमा आर्थिक क्रान्ति ल्याउने श्रेय देङ सेओपिङलाई जान्छ । देङ सेओपिङले १९७८ मा आर्थिक क्रान्ति सुरु गरेका थिए । यो क्रान्ति २०१८ मा आएर ४० वर्ष पूरा भएको छ ।
नेपाल भ्रमण वर्ष : पहिला पर्यटकीय सुधार
सरकारले पुनः सन् २०२० लाई पर्यटन वर्षका रूपमा मनाउने तयारी गरेको छ । सन् २०२० मा १५ लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने मूल उद्देश्य राखेर मनाउन लागिएको ‘भिजिट नेपाल इयर’का लागि छिट्टै सचिवालयसमेत गठन गरिने पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले बताउँदै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणले नेपालमा केरुङ–काठमाडौं रेलको चर्चा चुलीमा पुगेको छ ।
पछाडि धकेल्ने बजेट प्रणाली
सरकारले आगामी एक आर्थिक वर्षमा गर्ने विकास क्रियाकपालको योजना, त्यसका लागि आवश्यक पुँजी र सो पुँजीको स्रोतको पूर्वानुमान गर्ने कार्य वार्षिक बजेट हो । सरकारी बजेटलाई मूलतः विकास खर्च र प्रशासनिक खर्चमा विभाजन गरिन्छ । कार्यालय व्यवस्थापन र कर्मचारीका लागि गरिने खर्च प्रशासनिक खर्च हो भने जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न गरिने आर्थिक सामाजिक विकास निर्माणका कार्य विकास खर्च हो ।
नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यता, सांस्कृतिक विविधताले पर्यटन विकासको सम्भाव्यतालाई छातीमा लुकाएको छ ।
विद्युत् विकासको वर्तमान
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसअघि नेपाल आउँदा भनेका थिए— नेपालको विकासलाई हाई वे, आई वे र ट्रान्स वेबाट हिट गर्न सकिन्छ । वास्तवमा ती तीन कुरामध्ये ट्रान्स वेको अर्थ ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गरेर भारतबाट बिजुली ल्याउनु भन्ने हो ।
पुँजीबजारमा बजेटको भूमिका
सामान्यतया बजेटमा लिइने पुँजीबजारसम्बन्धी नीतिले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको वार्षिक अनुमानित बजेट संघीय संसद्मा पेस गरिसकेको छ ।
धन्य हामी सहनशील जनता
विश्वका अन्य मुलुकको भौतिक–आर्थिक प्रगतिका बारेमा थोरबहुत हामी पनि जानकार छौं । हाम्रो देश पनि अब आर्थिक विकासतर्फ उन्मुख हुने भन्ने कुरा सुन्दै आएका छौं ।
सुशासन र समृद्धिका कुरा
नेपाली जनता लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि सात दशकभन्दा बढी समय निरन्तर लडिरहे । परिणामतः निरंकुश राणा ासन, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था र सामन्ती राजतन्त्रको अवसान हुन पुग्यो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली मंगलबारदेखि चीन भ्रमणमा छन् । धेरैलाई लाग्ला, ओलीले चीनबाट रेलमा समृद्धि बोकेर ल्याउँछन् । तर, कटु सत्य के हो भने चीन वा भारत वा अन्य कुनै मुलुकले पनि नेपाललाई समृद्ध बनाउन सक्दैनन्, सिर्फ र सिर्फ नेपालीले मात्रै नेपाललाई समृद्ध बनाउने सामथ्र्य राख्छन् ।
खेलकुद र अर्थतन्त्र
विश्वकप फुटबल, २०१८ को आयोजना रसियामा भइरहेको सन्दर्भमा आम नेपाली फुटबलप्रेमीमाझ यसको चर्चा चुलिएको छ । यहाँ चर्चा मात्र चुलिएको छैन, जर्सीको व्यापार, टिभीको व्यापार, डिजिटल सेटअप बक्सको व्यापार, रेस्टुराँ, किराना सबैतिरको व्यापार पहिलेभन्दा अकासिएको हामीलाई सर्वविदितै छ । प्रचलित शब्दमा भन्दा आजको वैश्य (व्यापार) युगमा खेलकुद क्षेत्र पनि वित्तमुखी र व्यावसायिक भएको छ ।
आईसीपीको सास्तीले व्यापारी तनावमा
नेपाल र भारतबीच हुने आयात निर्यात व्यापारमा सहजता होस् भन्ने उद्देश्यका साथ अत्याधुनिक र सुविधाजनक आईसीपी (एकीकृत जाँच चौकी) निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।